Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Fuula Buurta Kilimanjaro Fariin Rajo leh
Safarka Dalxiiska • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda
Lixdan sano ka hor, sarkaalkii hore ee ciidamada Tansaaniya, Late Alexander Nyirenda, wuxuu fuulay Buurta Kilimanjaro ka dibna wuxuu ka taagay Tanzania “Xorriyad Xorriyad” oo caan ku ah barafka ugu sarreeya si uu u baraarujiyo nabadda, jacaylka, iyo ixtiraamka dadka Afrika.
Munaasabad tan la mid ah ayaa la qabanqaabinayaa si loo soo jiito dadka ku nool Tanzania, Afrika, iyo adduunka intiisa kale.
Dhacdadani waxay noqon doontaa in la lugeeyo ka dibna la qabsado meesha ugu sarreysa ee barafka leh ee Mount Kilimanjaro horraantii Diseembar ee sannadkan-2021.
Tani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo 60 -sano guuradii ka soo wareegtay xornimada Tansaaniya loo sameeyay si isbadal leh.
Fuulayaasha waqtigaan waxay farriin rajo ah ka dirayaan “Saqafka Afrika” oo ah in Tansaaniya iyo ummadaha kale ee Afrika ay ammaan u yihiin safarka waqtigaan marka tallaallada COVID-19 ay ka dhacayaan dhammaan qaaradda oo dhan.
Markii Tansaaniya ay shidday “Tooshkii Xorriyadda” ee ugu sarreeyey Mount Kilimanjaro 60 sano ka hor, waxay astaan ​​ahaan ula jeeday inay ka soo dhalaasho xuduudaha ka dibna rajo u keento Afrika oo dhan oo ay quus ka jirtay, jeclaaday meeshii ay cadaawad ka jirtay, iyo ixtiraam meesha nacaybku ka jiray.
Laakiin sanadkaan, kuwa fuulaya buurta Kilimanjaro waxay u dirayaan farriin rajo ah in Tansaaniya ay tahay meel nabdoon oo loogu talagalay booqdayaasha iyo sidoo kale in Afrika ay hadda ammaan u tahay socdaalka kadib markii dhowr dowladood oo qaaraddan ah ay qaadeen tallaabooyin kala duwan oo lagu xakameynayo masiibada .
Ololaha lagu soo jiidanaayo dadka ka kala yimid qeybaha kala duwan ee Afrika iyo adduunka si ay u qabsadaan meeshan ugu sarreysa Afrika ayaa qeyb ka ah dabaaldegyada lagu xusayo 60 -sano guuradii ka soo wareegtay xornimada Tansaaniya 9 -kii Diseembar ee sannadkan, iyadoo dunidu si tartiib tartiib ah uga soo baxeyso saameynta Cudurka caalamiga ah covid19.
Jardiinooyinka Qaranka Tansaaniya, oo ah ilaaliyaha Mountain Kilimanjaro ee ilaalinta, ayaa hadda si wadajir ah ula shaqeynaya shirkado kale oo dalxiis ah si ay u soo jiitaan dadka si loogu dabaaldego 60 -kii sano ee Tansaaniya ee Saqafka Afrika.
Tallaabooyin ammaan ayaa jira, oo socotadu waxay dib ula midoobayaan kuwa ay jecel yihiin meelaha gaarka ah ee naftoodu ay rabto inay ku xirmaan.
Dhimashada ceeryaamo inta badan maalintii, Buurta Kilimanjaro, oo ah meesha ugu sarraysa Afrika, waa dalxiis u gaar ah dalxiiska Tansaaniya, oo soo jiita qiyaastii 60,000 oo fuula sannad walba.
Buuruhu wuxuu matalaa muuqaalka guud ee Afrika, oo koorkeeda dhaadheer ee barafku u sarreeyo wuxuu la mid yahay Afrika.
Caalami ahaan, caqabadda barashada, sahaminta, iyo fuulidda buurtan dahsoon ayaa qabatay malaha dadka adduunka oo dhan. Dad badan, fursadda ah inay buurtaan fuulaan waa tacabur nololeed.
Sannadkii 1961 -kii, calankii Tansaaniya ee dhowaan xorta ahaa ayaa kor loo qaaday buurta si loogu dhejiyo meeshii ugu sarraysay. Tooshka xorriyadda ayaa sidoo kale kor u kacay si loo kiciyo ololaha midnimada, xorriyadda, iyo walaalnimada.
Buurta Kilimanjaro ayaa weli astaan ​​iyo sharaf u ah Bariga Afrika iyadoo caan ku ah dalxiiska. Buurtan ugu dheer Afrika ayaa lagu taxay 28 goobood oo loo dalxiis tago dunida istaahila in uu noqdo tacabur nololeed.
Soo -booqdeyaasha aan u kici karin heerkiisa ugu sarreeya ayaa laga yaabaa inay ku raaxaystaan ​​inay ka daawadaan quruxdeeda dabiiciga ah tuulooyinka halkaas oo ay awoodaan inay sawirro uga qaadaan buurtan hal -abuurka leh.
Chris Lyle wuxuu leeyahay,
September 16, 2021 at 01: 34
Waad ku mahadsan tahay maqaalka weyn, dib u soo celinta xusuusta weyn. Aniga, sidoo kale, waxaan dusha ka saarnaa Kilimanjaro maalinta xornimada Tanganyikan ee xusuusta leh 60 sano ka hor, anigoo ku xanibmay koonfurta dugsiga Nairobi. Soo noqoshada buundada Namanga ayaa daad qaaday waxaana nala daweeyay aragtida Jomo Kenyatta oo la dul marinayo qalfoofka oo weli laga wareejinayo baabuur dhinaca Tanganyikan ah oo loo wareejinayo mid dhinaca Kenya ah. Markii ay biyihii dhaceen maalintii ku xigtay waxaan awoodnay inaan isku qabsanno sariirta webiga. Waxaan ku farxi lahaa inaan la wadaago xusuusin badan haddii ay jirto dan.